10 Epic Ebe ileta Na China | Save A Train
Home > Zụọnụ Travel China > 10 Epic Ebe ileta Na China
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 07/02/2021)
Ala nke akụkọ mgbe ochie, Dynasties, ọdịbendị, na ndị mmadụ na-ewu nnukwu anwansi China, ulo nke 10 ebe kachasị mma iji gaa China. Ebe ọ bụla na-adọrọ adọrọ, na-akọ akụkọ mgbe ochie na okwute okwute ọ bụla, akwa, na pristine mmiri nke 1000 ọdọ mmiri.
Nke na-esote 10 ebe kachasị mma iji gaa China, abụwo ndị njem na-adọrọ mmasị kemgbe ọtụtụ puku afọ, ya mere kwadebe maka njem nke ndụ gị niile.
1. Epic Ebe ileta na China: Zhangye Danxia Landform
Ihe omimi di egwu, na Zhangye Danxia National Park dị na mpaghara Gansu dị na elu nke 10 ebe kachasị mma iji gaa China. na 2009, “Igwe ojii na-acha ọbara ọbara” Ogige ntụrụndụ Danxia ghọrọ ebe nketa ụwa UNESCO.
Ogige ogige nke 50 square kilomita, na-ezu ike na ukwu nke ugwu Qilian. Nke a eke iju were ọtụtụ puku afọ iji mepụta ịma mma nke na-adọta ndị njem si gburugburu ụwa. Mpaghara a bụbu oke osimiri, jiri nwayọọ nwayọọ gbanwee ọdịdị ala ya ka ọ bụrụ elu na ụzọ ụkwụ, site na oroma gaa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mara mma nke ukwuu.
Kedu ka m ga-esi banye na Danxia Landform Na China?
Nwere ike ịga Zhangye site na Lanzhou n'otu awa, ma ọ bụ were eco-enyi na enyi ụzọ ụgbọ oloko. Ọ bụ naanị 6 awa ụgbọ okporo ígwè.
2. Epic Ebe ileta Na China: Yuanyang Osikapa Terraces
Ọ bụrụ na ị na-achọ ahụmahụ dị egwu, mgbe ahụ ihe The Epic njem na-echere ala 3,000 Nzọụkwụ dị na mbara ala osikapa Yuanyang. Ga-ahụ mbara ala osikapa ndị a dị ịtụnanya na mpaghara Yunnan, na ugwu Ailao. Ndị Hani na-adọrọ mmasị kere ọmarịcha ebe a 2,500 afọ ndị gara aga.
'The nkà nka' wee rụpụta a UNESCO ụwa nketa saịtị na aka aka ha, tinyere Red River na ihe karịrị 113 square kilomita. November bụ otu n'ime oge kachasị mma iji gaa leta nke abụọ kachasị ebe nleta na China.
Kedu ka m ga-esi banye na Terraces osikapa Yuanyang?
First, kwesịrị ị gaa Kunming obodo, ma jiri bọs gaa Yuanyang. Otu mgbọ ụgbọ oloko na Jianshui ga-abụ ụzọ kachasị mma iji gaa, ma banye ụgbọ ala ahụ gaa Yuanyang.
3. Epic Ebe ileta Na China: Ọdọ Mmiri Qinghai
Ọdọ mmiri kachasị elu na China, Ọdọ mmiri Qinghai bụ ebe nke atọ kachasị mma ileta na China. Ọ bụrụ na ị kpebie ileta ọdọ mmiri a na-adọrọ adọrọ, I kwesiri ima na Osimiri Koko Nor, dị na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke ugwu Tibet. Ya mere, Ndị mọnk Tibet na ndị Tibet na-ewere ya dị ka ihe dị nsọ.
Na mgbakwunye na eziokwu a, mgbanwe oge a na-agbanwe agbanwe, mee ọdọ ọdọ Qinghai dị ịtụnanya ma dịkwa ka ebe ọ bụla na China. Can nwere ike ịga leta Lake Qinghai n'oge ọkọchị, mgbụsị akwụkwọ ma ọ bụ mmiri, ma chọpụta ọdọ mmiri dị iche iche oge ọ bụla.
Kedu ka m ga-esi banye n'ọdụ ụgbọ mmiri Qinghai?
Firstly, were ụgbọ oloko ahụ gaa Xining, ma nweezie ụgbọ ala ma ọ bụ gbazite ụgbọ ala gaa na ọdọ mmiri Qinghai.
4. Zhangjiajie – Precipitous Ogidi
Usoro nke ogidi, na precipitous Zhangjiajie ọhịa park bụ kpam ịtụ ụjọ-awaking ọdịdị ijuanya na China. Zhangjiajie bụ ebe dị iche iche nke usoro sandstone ị gaghị ahụ ebe ọ bụla n'ụwa. Nke a The Epic ebe ileta na China nwere ihe karịrị 200 ọnụ ọnụ, spiers, na ugwu nke si n’elu uwa na-arigo.
Na mgbakwunye, ị ga-enwe ihu ọma ihu mmadụ atọ pere mpe bi na mpaghara a dịpụrụ adịpụ, na umu anumanu di egwu dika mgbada mmiri nke China na ndi China salamander.
Olee Otú M Ga-esi Zhangjiajie formations?
Ọ bụrụ na ị na-eme njem site na Beijing, Shanghai, ma ọ bụ Xian, mgbe ahụ ụgbọ okporo ígwè na-aga Zhangjiajie.
5. Jiuzhaigou – Osimiri Alpine na-agba agba
Mmiri mmiri dị egwu, ọdọ mmiri, 9 Obodo ndị Tibet, na kasị mara mma, mee ndagwurugwu Jiuzhaigou otu n'ime 10 ebe ndị njem gaa na China. U ga ahụ Jiuzhaigou na oke ugwu ugwu Shan, na ọ bụ n'ezie a National park.
Mgbe ịdị elu nke 2,472 m. ị ga-ahụ Osimiri Ifuru Ifuru. Ọ bara uru njem ọ bụla maka agba ndị pụrụ iche, ihe na-esi na okwute ọdọ mmiri ọdọ-ala, and colorful algae. ndị a 2 Eziokwu na - emepụta mmetụta ọdọ mmiri Alpine nke ọnụ mmiri na mmiri na - acha anụnụ anụnụ - mmiri iyi.
Kedu ka m ga-esi nweta Jiuzhaigou?
Ikwesiri iru Chengdu, isi obodo mpaghara Sichuan na ndịda ọdịda anyanwụ China bọs na ụgbọ elu.
6. Mpaghara Western Sichuan – Daocheng Yading Nature Ebe nchekwa
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịtụgharị uche na ọdịdị mara mma nke China, snowy ọnụ ọnụ, ọdọ mmiri dị ọcha, na hiking paradaịs, mgbe ahụ Yading Reserve reserve dị mma maka gị. ’Ll ga-achọpụta ebe Epic a na mpaghara Sichuan na China, ọ ga-akara gị mma ma ọ dịkarịa ala 2-3 ụbọchị, ịchọpụta ihe ịtụnanya ya niile.
"Ikpeazụ Shangri-La" bụ ụlọ nke atọ Chianrezig, Jambeyang, na ugwu Chanadorje, na-etolite triangle guzobe, na ebe ị ga - ahụ echiche kachasị mma na Daocheng. Ọzọkwa, ọ kaara gị mma ịkwado maka 1,000 ọdọ mmiri, otu n'ime ha bụ ọdọ mmiri "Mmiri ara ehi" na-ezighi ezi, na ịtụnanya Ise Agba Danzhen ọdọ na 4,600 mita.
Kedu ka m ga-esi nweta Daocheng Yading?
Ọ bụrụ n’obere oge, mgbe ahụ gbagoo n'ọdụ ụgbọ elu Yading, ma were ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu were Daocheng. I nwekwara ike iji bọs gaa Shangri-La, ma si n'ebe ahụ were ụgbọ njem nlegharị anya gaa Yading. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ịchọpụta ebe a epic na China, mgbe ahụ rahụ na Daocheng.
7. Epic Ebe ileta Na China: Fenghuang, Unangbè Hunan
Fenghuang bụ otu n'ime omenala ebe anyị 10 ebe ndị njem gaa na ndepụta China. E wuru obodo a nke ọma echekwara na Ndị eze Qing ma mee ka ikuku ya n'oge ochie na echiche ya gafee 300 afọ.
Ya mere, mgbe ị banyere n'obodo a mara mma, ị ga-eche na ị na-agagharị n'ụzọ nkịtị n'oge. Ulo osisi nke obodo, àkwà mmiri, ụlọ arụsị anaghị emetụ aka n'oge ma mepụta ikuku dị ịtụnanya n'ehihie ma ọ bụ n'abalị.
Dabere na akụkọ, obodo ahụ nwetara aha ya “Phoenix” mgbe 2 Phoenix achọghị ịpụ n'ihi na ọ mara ezigbo mma, ya mere ha nọgidere na-eche ya nche.
Otu esi enweta Fenghuang?
Ọ bụ naanị ụgbọ ala na-aga Fenghuang, enweghị ụgbọ oloko. Nwere ike bọs site na obodo ndị dị nso na Hunan, dị ka Changsha, na Zhangjiajie.
8. Epic Ebe ileta Na China: Nnukwu mgbidi nke China
Nnukwu mgbidi nke China bụ otu n'ime ihe ịtụnanya ụwa, ya mere o doro anya na ọ na atụmatụ anyị 10 ebe kachasị mma iji gaa China.
N'ihi na n'elu 2,300 ọtụtụ afọ Nnukwu mgbidi nke China na-achị ebe ọdịda anyanwụ China, ọ bụkwa ihe pụtara ìhè na njem ọ bụla na China. dị mwute ikwu na, afọ ole na ole n'ihi mbibi mmiri na mmebi mmadụ - 2,000 kilomita agafeela ihe ịrịba ama a pụrụ iche.
Ikwesiri iburu n'uche na oburu na ichoro ije ije n'ofe mgbidi, ọ ga-ewe gị 18 ọnwa ma ọ dịkarịa ala iji wuchaa Great Wall of China ije.
Kedu ka m ga-esi banye na nnukwu mgbidi nke China?
Nwere ike were ụgbọ oloko site na Beijing gaa ọdụ ụgbọ oloko Badaling, ma were ụgbọ ala mgbaba na-akwụghị ụgwọ gaa n'ọfịs tiketi ọwụwa Badaling Great Wall.
9. Epic Ebe ileta Na China: Ọdọ mmiri Qiandao
Na ihe karịrị 1000 isuo, Ọdọ Qiandao bụ otu n’ime ebe kachasị epic n’ụwa, hapụ China. Ga-ahụ ọdọ a magburu onwe ya na mba Chunan, Mpaghara Zhejiang, na-ekpuchi ebe 580 square kilomita.
Puku mmiri agwaetiti bụ nke mmadụ mere ma kee ya mgbe emere mmiri ahụ 1959. Ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma ịga njem Qiandao ọdọ na China, ị ga-enwe epic oge na-achọpụta ọtụtụ ọdọ mmiri ya na ogige ọhịa.
Uzo esi aga na ọdọ mmiri Qiandao?
The best way to travel to Qiandao lake is by taking the train from Hangzhou to Qiandaohu Station then take the taxi to Ọdọ mmiri Qiandao.
10. Epic Ebe ileta Na China: Lijiang Obodo Ochie
Lijiang bụ obodo ochie nke abụọ na anyị 10 ebe ndị njem gaa na ndepụta China, na otu onye n'ime 4 ọtụtụ obodo ochie echekwara nke ọma na China. Pleslọ nsọ Lijiang, ihe owuwu Naxi pụrụ iche nke ụlọ ụlọ ochie na-arụ ụlọ na ogige ya, bụ nnọọ a n'anya.
Ka ị na-aga ije na Lijiang’s cobbled n'okporo ámá, oriọna uhie n’elu, ma chọpụta 354 àkwà mmiri, ọ ga-eju gị anya ma nwee mmasị n’ọdịbendị ndị Naxi, na ije.
Kedu ka m ga-esi nweta Fenghuang Obodo Ochie?
Zọ kachasị mma iji ruo Lijiang obodo ochie bụ site na iwere Traingbọ ala China gaa Lijiang ụgbọ okporo ígwè, mgbe ahụ bọs ma ọ bụ ụgbọ ala.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem gị gaa ndị a 10 kacha The Epic ebe ileta na China ụgbọ okporo.
Dị chọrọ embed anyị blog post “10 Ọtụtụ Epic Places Iji Gaa Na China”N'elu saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fepic-places-visit-china%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)